About us - SUYI UKUNGENISA NOKUTHUTHELA CO., LTD
Sawubona ntambama, ake ngizethule.
I-CARGO517 SUYI IMPORT KANYE NE-EXPORT CO., LTD
Ihhovisi lethu liseningizimu yeChina edolobheni laseYiwu, isikhungo somhlaba sokukhiqiza nezohwebo, esivumela ukuthi sixazulule imisebenzi ebekwe amaklayenti ethu ngokushesha nangempumelelo ngangokunokwenzeka. Siphinde sibe nezinqolobane edolobheni i-Yiwu, eGuangzhou, eMoscow
Inkampani yethu ibamba iqhaza emibukisweni eminingi emikhulu ukuze ikwazi ukuqonda imakethe futhi ihambisane nemikhuba emisha. Emsebenzini wethu sisebenzisa imizila ye-logistics ekhethekile, ubuchwepheshe obusesikhathini samanje nezindlela zokuxhumana.
Ngokuxhumana nathi ungathola:
- Uhla oluphelele lwezinsizakalo zokusebenza neChina
- Zonke izindlela ezinokwenzeka zokuhamba nezindlela zokulethwa ezivela eChina
- Amanani aphezulu kakhulu emakethe
- Izisombululo zomuntu ngamunye zeklayenti ngalinye
-Izixazululo zokuhweba nezomnotho ezizimele zeklayenti ngalinye
- Isheduli ejwayelekile yokuthumela imithwalo yeqembu masonto onke: auto izikhathi 3-4, ulwandle izikhathi 1-2, umoya izikhathi 5-6, ukuveza nsuku zonke
- Ukusetshenziswa kwamahhala kwezinqolobane eChina
- Ukubonisana kwamahhala ekusebenzeni neChina
- Ummeleli wamahhala e-China ukusiza ukuvikela izintshisekelo zakho nabahlinzeki bakho noma abalingani baseChina
Awudingi ukuchitha isikhathi nomzamo usesha imikhiqizo futhi uxhumane nomhlinzeki waseChina. Singakunika inketho yemikhiqizo eminingana evela kubakhiqizi abahlukene ngasikhathi sinye, futhi oda amasampula, qhathanisa ikhwalithi namanani entengo. Kanye nensizakalo eyodwa yokuhlanganiswa kwempahla. Sizojabula ukubambisana nawe. Khetha i- "SUYI", khetha ukuwina kwakho. Bonke abasebenzi beSUYI bakufisela impilo enhle nempumelelo emsebenzini wakho.
Senze umsebenzi omuhle ukuhlinzeka ngezimo ezinhle kakhulu kumakhasimende ethu.
10 IMINYAKA EMakethe
Besisebenza emakethe yezokuthutha imithwalo kusukela ngo-2010. Phakathi neminyaka eyi-10 yokusebenza, senze umsebenzi omuhle ukuhlinzeka ngezimo ezinhle kakhulu nezinsizakalo zamakhasimende ethu.
Ngokuxhumana nathi ungathola uhla oluphelele lwezinsizakalo zokuhweba, ezomnotho nezokuthutha ngokusebenzisana neChina.
Sinikezela ngensizakalo yomuntu ngamunye, futhi abaphathi bethu uqobo bahlala bekulungele ukukunikeza izixazululo zokuhleleka okwenzelwe wena.
SIZOSIZA UKUTHENGA IZIMPAHLA ZONKE ZISUKA ECHINA KUSUKA KUMKHIQIZO